Iidyunivesithi ezi-8 ezixabiso liphantsi eNetherlands 2022
Disemba 1, 2021 Eze uThadayo
Iidyunivesithi ezi-8 ezixabiso liphantsi eNetherlands
Zininzi iiyunivesithi eziphantsi eYurophu kwaye apha sixoxe ngezona yunivesithi zinexabiso eliphantsi eNetherlands ukuze uphile iphupha lakho lokufunda phesheya.
I-Netherlands lilizwe laseYurophu elaziwa ngokuba neendawo ezintle zomhlaba, ii-windmills, kunye neendlela zokuhamba ngeebhayisikile. Njengayo nayiphi na enye indawo emhlabeni, inezakhiwo zembali kunye neempawu zomhlaba ezitsala abakhenkethi abavela kwihlabathi liphela. Ulwimi lwayo olusemthethweni sisiDatshi kwaye lelinye lawona mazwe atyebileyo eYurophu.
Kuqhelekile ukuba iidyunivesithi zaseYurophu zingabizi mali ininzi, kwanabafundi bamanye amazwe, kwaye iNetherlands ayixolelwanga. Esi sesinye sezizathu ezibangela ukuba abafundi abaninzi batsaleleke ukuba bafunde kwiidyunivesithi zaseYurophu kwaye bafumane imfundo ekumgangatho wehlabathi njengoko uninzi lwezi zikolo ziphakathi kwezona zibalaseleyo kwihlabathi.
Ke ngokobuchwephesha, ngokufunda kwenye yeeyunivesithi zexabiso eliphantsi eNetherlands ufumana isidanga esiphakamileyo kunye nohlahlo lwabiwo-mali oluphantsi. Ezinye izizathu eziqhuba abantu basemzini ukuba beze kufunda isidanga eNetherlands ziindlela zabo zokufundisa ezintsha, izidanga ezaziwa kwihlabathi liphela, kunye neenkqubo ezininzi zesidanga ezifundiswa ngesiNgesi.
Ezinye iiyunivesithi zaseNetherlands zikwinqanaba eliphezulu ngokweenkqubo ezinjengomthetho wamazwe ngamazwe, ubunjineli, imathematika, amayeza, ishishini, kunye nezinye ezininzi. La ngamanqanaba ahlala nezinye iidyunivesithi ezinjengeMIT, iHarvard, UC Berkeley, Yale, NYU, Stanford, kunye nezinye ezininzi.
1 Uzifumana njani iiDyunivesithi ezixabiso liphantsi eNetherlands
2 Umyinge weMfizo yokuFundisa eNetherlands yaBafundi baMazwe ngaMazwe
3 IiMfuneko zokufaka isicelo kwiiDyunivesithi zaseNetherland
4 Iidyunivesithi ezingabizi kakhulu eNetherlands
4.1 1. IYunivesithi yaseAmsterdam (UvA)
4.2 2 IYunivesithi yase-Utrecht
4.3 3. IYunivesithi yaseGroningen
4.4 4. IYunivesithi yaseTwente
4.5 5. IYunivesithi yaseRadboud
4.6 6. IYunivesithi yeTekhnoloji yaseDelft (TU Delft)
4.8 8. IYunivesithi yaseFontys yeeSayensi eziSetyenzisiweyo
Uzifumana njani iiDyunivesithi ezixabiso liphantsi eNetherlands
Zininzi izixhobo kwi-intanethi ezinokukunceda ekufumaneni ezona yunivesithi zinexabiso eliphantsi eNetherlands kwaye le post yebhlog yenye yazo. Unokubhekisa kootitshala beklasi yakho kunye nabahlohli malunga nomnqweno wakho wokufunda eNetherlands kunye nokuba ungayifumana njani enexabiso eliphantsi.
Umyinge weMfizo yokuFundisa eNetherlands yaBafundi baMazwe ngaMazwe
Imali yokufunda eNetherlands yabafundi bamazwe aphesheya iyahluka ngeyunivesithi, inkqubo kunye nenqanaba lokufunda. Nangona kunjalo, sikwazile ukunika umndilili wemali yokufunda esekwe kwiinkqubo zesidanga ezahlukeneyo.
Umyinge womrhumo wokufunda eNetherland kubafundi bamazwe aphesheya kwiinkqubo zesidanga sokuqala uphakathi kwe-8,000 kunye ne-£ 20,000 ngonyaka ngokuxhomekeke kwinkqubo.
Umyinge womrhumo wokufunda eNetherland kubafundi bamazwe aphesheya kwiinkqubo zenkosi uphakathi kwe-10,000 kunye ne-19,000 yeedola ngonyaka ngokuxhomekeke kwinkqubo.
Umyinge wemali yokufunda eNetherland kubafundi bamazwe aphesheya kwiPh.D. Inkqubo iqhele ukuba yi-£0 kuba uya kusebenza kunye neenjingalwazi kwaye uhlawulwe imali yenyanga endaweni yoko.
IiMfuneko zokufaka isicelo kwiiDyunivesithi zaseNetherland
Oku kulandelayo ziimfuno ezinokucelwa ziiyunivesithi zaseNetherland:
Abafundi abafaka isicelo kwinkqubo efundiswe isiNgesi kwaye abasisithethi sesiNgesi somthonyama kufuneka bathathe olunye lweemvavanyo ezaziwayo zobuchule bolwimi lwesiNgesi kwaye baphumelele amanqaku adibeneyo.
Abafake izicelo kufuneka babe ne-visa yabafundi okanye imvume yokufunda
Zonke iitranskripthi zezifundo ezivela kwizikolo zangaphambili ebesiya kuzo zidla ngokufuneka
Amaxwebhu afana nesazisi, iileta zengcebiso, iCV, isitatimenti somntu, njl.
Isikolo sinokunika uvavanyo lwangaphakathi okanye udliwano-ndlebe ukulungiselela olunye uvavanyo, kufuneka abenzi-sicelo balungiselele iingqondo zabo kulo.
Isiphumo esigqwesileyo semfundo kunye nokubandakanyeka okusebenzayo kwiindawo zabo zokuhlala kuya kukwandisa ukwamkelwa kwakho.
Qaphela ukuba ezi ziimfuno eziqhelekileyo kwaye kunokubakho ngaphezulu okanye ngaphantsi. Ukuza kuthi ga ngoku, ngelixa sixoxa ngezona yunivesithi zinexabiso eliphantsi eNetherlands ngezantsi, sinikeze amakhonkco afanelekileyo kwiyunivesithi nganye ukuba ufunde ngeemfuno zenkqubo ethile.
Iidyunivesithi ezingabizi kakhulu eNetherlands
Apha, sidwelise ezona yunivesithi zinexabiso eliphantsi eNetherlands kwaye saxoxa ngazo zonke ngakumbi apha ngezantsi. Amakhonkco ewebhusayithi yesikolo ngasinye nawo anikezelwe ukwenza ukuba undwendwele isikolo onomdla kuso ukuze ufunde ngakumbi malunga nezinye izinto ezifana nenkqubo yesicelo, umhla wokugqibela wokufaka izicelo, amathuba oncedo lwemali, nokunye.
1. IYunivesithi yaseAmsterdam (UvA)
IYunivesithi yaseAmsterdam yenye yezona yunivesithi zindala eNetherlands esekwe ngo-1632 kwaye isazisa iinkqubo ezintsha zodidi lwehlabathi. Yiyunivesithi yophando kawonke-wonke ehlala eAmsterdam, eNetherlands, ebonelela ngoluhlu olubanzi lweenkqubo zesidanga sophando kumacandelo ahlukeneyo.
Iiprogram ze-Bachelor, ii-master's, kunye ne-doctorate zinikezelwa ngokusebenzisa izakhono zakhe ezisixhenxe zobuntu, inzululwazi yezentlalo kunye nokuziphatha, ezoqoqosho kunye neshishini, isayensi, umthetho, amayeza, kunye nonyango lwamazinyo. Iinkqubo ezingaphezu kwama-220 zifundiswa ngolwimi lwesiNgesi. I-UvA yenye yeeyunivesithi ezingabizi kakhulu eNetherlands ngeefizi zokufunda eziqala kwi-£2,100 ngonyaka kubafundi be-EU/EEA kunye ne-£8,100 ngonyaka kubafundi abangengabo abe-EU/EEA.
Kuba iyiyunivesithi yoluntu, ixhaswa ngemali ngurhulumente kwaye ke ngoko yamkela abafundi abavela kwiinkcubeko ezahlukeneyo abenzayo. Iimfuno zokwamkelwa azinzima kakhulu kwaye nezinga lokwamkelwa lisezantsi kuba, ngoku, yeyona yunivesithi inkulu eNetherlands ngobhaliso. Ukuqhagamshelana neofisi yolwamkelo kwaye mhlawumbi ufumane i-scholarship enokuxhasa imfundo yakho kwi-UvA, landela ikhonkco elinikwe ngezantsi.
2. IYunivesithi yaseUtrecht
IYunivesithi yaseUtrecht ikwiPhondo lase-Utrecht, eNetherlands, kwaye yenye yezona yunivesithi zixabisa kakhulu eNetherlands. Ngenxa yodumo kunye nemfundo egxile kuphando inika abafundi abavela eYurophu nakwezinye iindawo zelizwekazi umhlambi apha minyaka le ukuze bafunde ii-bachelor's, master's, okanye zobugqirha. Ngaphandle kwezi, i-Utrecht ikwabonelela ngezinye iinkqubo zemfundo ezifana nemfundo yobungcali, imfundo yeembacu, isikolo sasehlotyeni sase-Utrecht, iihonours kunye neenkqubo zotshintshiselwano, imfundo ye-intanethi, kunye nolunye uqeqesho loqeqesho.
Iyunivesiti yahlulwe yangamacandelo asi-7 aphambili obuntu, isayensi yezentlalo, umthetho kunye nezoqoqosho, amayeza, i-geosciences, iyeza lonyango lwezilwanyana, kunye nesayensi yendalo. Zingaphezulu kwe-100 iinkqubo ezifundiswa ngesiNgesi nto leyo iluncedo kubafundi bamazwe aphesheya abanomdla wokufunda apha kwaye ayibizi.
Imali yokufunda yabafundi abangekathweswa izidanga kunye nabaphumeleleyo iqala kwi-£2,200 ngonyaka kubafundi be-EU kunye ne-£10,000 ngonyaka kubafundi bamazwe aphesheya. Ph.D. abafundi baqeshwe sisikolo, ke ngoko, abahlawuli mali kodwa bafumana imivuzo yenyanga okanye yeveki esikolweni.
Ndwendwela iwebhusayithi yesikolo.
3. IYunivesithi yaseGroningen
Ukutsala abafundi ngemfundo ephantsi, iDyunivesithi yaseGroningen yenye yezona yunivesithi zixabisa kakhulu eNetherlands. Ikwidolophu edlamkileyo yaseGroningen edla ngokugqabhuka ngabafundi abavela kwiimvelaphi ezahlukeneyo. Iyunivesithi ibambisene nemibutho yamazwe ngamazwe kunye neeyunivesithi kwihlabathi jikelele, ngoko ke ingumxhasi omkhulu wemfundo yamazwe ngamazwe.
IYunivesithi yaseGroningen iboniswe ngokuzingca phakathi kweyona yunivesithi ibalaseleyo eYurophu nakwihlabathi. Ukuya eGroningen lithuba lokufikelela kwimfundo ekumgangatho wehlabathi kwaye ufumane isidanga sodidi oluphezulu olwamkelwa yimibutho kwihlabathi liphela.
Intlawulo yokufunda iqala kwi-£2,100 kubafundi abangekathweswa isidanga kunye nabafundi be-master abavela e-Netherlands kunye nommandla we-EU/EEA. Umrhumo wokufunda wabafundi bamazwe aphesheya kwizidanga kunye neenkqubo zenkosi iqala kwi-£9,000 kunye ne-£13,500 ngokulandelelanayo.
4. IYunivesithi yaseTwente
Yasekwa ngo-1961 njengeyunivesithi yophando loluntu kwisixeko sase-Enschede, eNetherlands, iYunivesithi yaseTwente yenye yezona yunivesithi zixabisa kakhulu eNetherlands. Nangona kutsha nje isekiwe, iyunivesithi iqhubekile yaba liziko elaziwa kwihlabathi jikelele lemfundo ephakamileyo linikezela ngemfundo ekumgangatho wehlabathi, evelisa izinto ezintsha kuluhlu olubanzi lweenkqubo zemfundo.
Ezi nkqubo zikhokelela kwi-bachelor, master's, kunye nezidanga zobugqirha kunye nezinye isatifikethi kunye neenkqubo zobungcali. Ngaphandle kokubonelela ngemfundo esemgangathweni oqhubela abafundi apha, iindleko zesikolo ziphantsi kwaye izidanga ezinikezelweyo zamkelwa kumazwe ngamazwe.
Imali yokufunda yabafundi abangekathweswa isidanga kunye nabafundi benkosi abavela kwimimandla ye-EU/EEA iqala kwi-£2,100 ngonyaka. Imali yokufunda yabafundi abavela kwamanye amazwe iqala kwi-£ 9,000 ngonyaka kwiprogram ye-undergraduate kunye ne-£ 12,500 ngonyaka kwinkqubo yenkosi. IYunivesithi yaseTwente ibonelela ngemali yokufunda kunye nezinye iindlela zoncedo lwezemali abafundi abanokuthi bafake izicelo kuzo.
5. IYunivesithi yaseRadboud
Kuluhlu lwethu lwesihlanu lweeyunivesithi ezinexabiso eliphantsi eNetherlands yiYunivesithi yaseRadboud, iyunivesithi yophando yoluntu eNijmegen, eNetherlands. Yasekwa ngo-1923 kwaye ukusukela ngoko ibisenza iinkqubo ezintsha kuzo zonke iinkalo zemfundo. Iyunivesithi inezindlu ezisi-7 zenzululwazi, ubugcisa, umthetho, inzululwazi zentlalo, iZiko lezoNyango leYunivesithi yaseRadboud, iSikolo soLawulo saseNijmegen, kunye neFaculty of Philosophy, Theology, and Religious Studies.
Uluhlu olubanzi lweenkqubo zinikezelwa kwi-bachelor, master's, Ph.D., kunye ne-pre-masters, kunye neenkqubo zabantwana. Uninzi lwezi nkqubo zinikezelwa ngesiNgesi kwilinge lokutsala abafundi bamazwe aphesheya. Ezi nkqubo zinzulu kuphando kwaye ziyilelwe ukuxhobisa abafundi ngezakhono zokuzalisekisa amakhondo abo ekhondo lomsebenzi.
Imali yokufunda yeenkqubo zesidanga sokuqala yi-£2,143 ngonyaka kubafundi be-EU kunye ne-£8,342 ngonyaka kumfundi wamazwe ngamazwe okanye ongengowase-EU. Abafundi be-EU kwinkqubo ye-master's bahlawuliswa imali yokufunda ye-£ 2,143 ngonyaka kwaye abafundi bamazwe ngamazwe okanye abangengabo abe-EU bahlawula i-£ 9,124 yonyaka.
6. IYunivesithi yeTekhnoloji yaseDelft (TU Delft)
I-TU Delft yenye yeyona yunivesithi inexabiso eliphantsi eNetherlands kunye neyona yunivesithi indala nenkulu yaseDatshi yaseNetherlands. Ikwayenye yezona yunivesithi zibalaseleyo eNetherlands, yenye yezona yunivesithi zibalaseleyo zobunjineli kunye netekhnoloji emhlabeni, kwaye phakathi kwezona zikolo ziphumelele izidanga emhlabeni.
Ngaphandle kokufundiswa ngexabiso eliphantsi, ukugqwesa kwayo ezifundweni kukwatsala abafundi abavela kuzo zonke iindawo zehlabathi. Eli ziko ligcina amacandelo asibhozo agxile kakhulu kubunjineli kunye nemfundo yobugcisa. Iiprogram zesidanga sokuqala kunye ne-master's degree zinikezelwa ngolwimi lwesiNgesi ukuhlangabezana neemfuno zemfundo zabafundi bamazwe ngamazwe.
Umrhumo wokufunda wabafundi abangekathweswa isidanga kunye nabafundi benkosi abavela kwimimandla ye-EU/EEA yi-£2,100 ngonyaka. Imali yokufunda yabafundi bamazwe aphesheya kwizidanga kunye neenkqubo zenkosi yi-£14,500 ngonyaka kunye ne-£18,750 ngonyaka ngokulandelelanayo.
I-Eindhoven Institute of Technology, eyaziwa ngokuba yiTU Eindhoven okanye iTU/e, yenye yezona yunivesithi zixabisa kakhulu eNetherlands. Liziko loluntu eliphezulu lobugcisa lokufunda elikwidolophu edlamkileyo yase-Eindhoven, eNetherlands. Uluhlu olubanzi lweenkqubo zedigri ezigxile kubuchwepheshe zinikezelwa kwi-TU/e ekhokelela kwi-BSc, MSc, Ph.D., kunye ne-PDEng degrees.
Kumanqanaba ehlabathi jikelele, iyunivesithi ikwi-100th isikhundla nangaphezulu kodwa ukwinqanaba eliphezulu kwisayensi yehlabathi kunye nezibonelelo zenkqubo yobunjineli. Iyunivesithi ibambisene namanye amaziko angaphandle kweYurophu ukomeleza imfundo yamazwe ngamazwe. Ukuba ufuna iziko eligxile kwiimfundiso zobuchwepheshe, i-TU / e kufuneka ibe phakathi kwezinto ozikhethayo.
Imali yokufunda iqala kwi-£ 10,000 kubafundi bamazwe ngamazwe.
8. IYunivesithi yaseFontys yeeSayensi eziSetyenzisiweyo
IYunivesithi yaseFontys yeSayensi eSetyenzisiweyo yenye yeyona yunivesithi inexabiso eliphantsi eNetherlands ineekhampasi ezintathu kwizixeko zase-Eindhoven, eTilburg naseVenlo. Ngaphezulu kwe-200 yeeprogram ze-bachelor kunye ne-master's zibonelelwa kuluhlu olubanzi lweenkalo zemfundo ezifana nobunjineli, iteknoloji yolwazi, i-physiotherapy, kunye nesikolo somdaniso uninzi lwazo lufundiswa ngesiNgesi kunye neelwimi zesiJamani.
Kukwakho neenkqubo ezimfutshane ezifana neenkqubo zotshintshiselwano kunye nesikolo sasehlotyeni. Esi sikolo sithathwa njengenye yeendawo ezinomdla zokufunda kuye nabani na onomdla kwitekhnoloji, ishishini kunye nobuchule. Iingcango zayo zivulekele abafundi abavela kuzo zonke iindawo zehlabathi.
Ngaphandle kokufundiswa okusemgangathweni, umrhumo ophantsi wokufunda ukwatsala abafundi abavela kuzo zonke iimbombo zone zomhlaba. Imali yokufunda yabafundi be-EU iqala kwi-£2,100 kunye ne-£7,920 kubafundi bamazwe ngamazwe.
Oku kuzisa isiphelo kwiiyunivesithi ezi-8 zexabiso eliphantsi eNetherlands. Uyazi, siwapapashe amanye amanqaku kwiiyunivesithi zaseYurophu kwaye zonke zinento enye efanayo - ziphakathi kwezona zibalaseleyo zehlabathi kwaye zinexabiso eliphantsi kakhulu.
Ukuba ufuna ukufumana imfundo esemgangathweni phesheya ngexabiso eliphantsi, unokufuna ukujonga iiyunivesithi zaseYurophu. Banikezela ngeedigri ezaziwayo kwihlabathi kwaye unokufumana lula i-scholarship ukuba uyahlangabezana nemigaqo yokufaneleka.
Uninzi lweeyunivesithi zaseYurophu zisimahla kubemi bakhe kunye nabafundi be-EU/EEA nabo.
Ngaba kuyabiza ukufunda eNetherlands?
INetherlands inokuba yindawo ephantsi yokufunda ukuba uyenza ngokufanelekileyo. Kuya kufuneka ufake isicelo kwiiyunivesithi zikarhulumente okanye eziphantsi korhulumente kunye nomthombo wokufunda onokuhlawulela yonke okanye isiqingatha semali yokufunda. Iindleko zokuphila nazo azibizi.
Ngaba zikho iiyunivesithi zasimahla eNetherlands?
Azikho iiyunivesithi zasimahla eNetherlands, unokufunda simahla kuphela ukuba ufumana i-scholarship exhaswa ngemali ngokupheleleyo ukuze uhlawule yonke imfundo yakho ngexesha lokufunda kwakho. Nangona kunjalo, urhulumente uye waxhasa ngemali yokufunda eyenza ibe yindawo efikelelekayo yokufunda.
Iidyunivesithi ezili-11 ezitshiphu eFransi zaBafundi baMazwe ngaMazwe
IiYunivesithi ezingenayo imali yokufaka isicelo eYurophu | Faka isicelo apha
IiYunivesithi eziPhezulu zamkela i-IELTS Inqaku 6 eYurophu
Ukufundiswa kweeMasters eYurophu
I-15 Scholarship eFundisiweyo ngokupheleleyo yaBafundi beZizwe baseYurophu
Isifundo kwamanye amazwe Isikhokelo IYunivesithi yaseYurophu Izikolo zokuFundisa Simahla IiYunivesithi eziFundayo eziNcinci
Post Previous:Iidyunivesithi ezili-13 eziBalaseleyo kuMthetho waMazwe ngaMazwe
Okulandelayo Post:Izikolo ezigqibeleleyo ze-11 zezona zikolo ziJapan